प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा फर्किएकी रामकुमारी झाक्री र योगेशले गरे यस्तो घोषणा – Classic Khabar
March 13, 2021 923
एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कडा चेतावनी दिएकी छन्। उनले अब जिन्दगीको अन्तिम र निर्णयाक आन्दोलन हुने बताएकी छन्।‘जे भइरहेको छ यो एकदमै गलत हो। विधानविपरीतको यो ज्यादती हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विसर्जन हो,’ उनले लेखेकी छन्, ‘तर, हामी यो आन्दोलनलाई यत्तिकै विसर्जन हुन दिनेछैनौं। यसको कानुनी उपचार र राजनीतिक प्रतिवाद दुवै गर्नेछौ। साथीहरू, हाम्रो जिन्दगीको यो अन्तिम र निर्णायक लडाइँ हुनेछ।’
यसैबीच, नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले धैर्यता कायम गर्न आह्वान गरेका छन् । साथै एकताको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै भट्टराईले ओली पक्षको निर्णयको सही र सशक्त ढंगले प्रतिकार गरौँ भन्दै एकताको विकल्प नभएको जनाएका छन् ।यस्तै, नेकपा एमालेका निर्वाचित उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न खोजेको तर त्यसलाई सफल हुन नदिइने बताएका छन् ।सामाजिक सञ्जालमा भुसालले एकतर्फी रुपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने तथा महाधिवेशनको मिति तोक्ने पछिल्लो निर्णयबाट ओलीले यसलाई थप पुष्टि गरेको बताए ।
Prevओलीले राजिनामा दिंदै, ओलीकै प्रस्तावमा यी नेतालाई बनाउने भए प्रधानमन्त्री ! ओलीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्मकै नयाँ !
Nextओली समूहलाई काउन्टर गर्दै माधव नेपालद्वारा समानान्तर कमिटी गठन, कसलाई के जिम्मेवारी ?
गणतन्त्रका नेता ले नै भन्न थाले हामिले राजाको जस्तो मान सम्मान पाएनौ, कठै बिचरा हाम्रा नेता-भिडियो सहित